Afriikaa Kibbaa: Maddi dhukkubba daddarbaa cimaa addunyaa (Listeeriyaa) beekame. - BBC News Afaan Oromoo
Afriikaa Kibbaa: Maddi dhukkubba daddarbaa cimaa addunyaa (Listeeriyaa) beekame.
Goodayyaa suuraa Gosa Listeeriyaa warshaa Polookwaaneetti argame iratti qorannoon geggeefame akka miidhaa kana qaqqabsiisu beekame.
Akka Afriikaan Kibba jettutti maddi dhukkuba daddarbaa (Listeeriyaa) kan waggaa darbe keessa namoota 180 galaafatee kana akka adda baafachuun danda'ame kan beeksiftee wayita ta'u - kun seenaa keessatti isa hamaadha jeteetti.
Maddi dhukkuba kanaas warshaa dhaabbata Nyaata hoomishuu kan Polookwaane, Limpoopoo keessatti argamu ta'uunis beekameera.
Dhibee daddarbaa gara namoota 1,000 faale kana fiduu keessatti qooda qabaachuu isaanii baruuf jecha dhaabbilee biroo hedduu irrattis qorannoon geggeefameera.
Balaan faalamuu kun foon warshaatti qophaawanii suuqii keessattis gurguraman irras qaqabuu ni mala ture jechuun ministirri fayyaa akkekkachiisaniiru.
''Foon warshaatti qindaa'uun nyaataaf qophii ta'e dhihaatu irraa of eegadhaa,'' jechuuniis Ministirri Fayyaa Aaroon Mootso'aleedi Dilbata irra gaazexesitootatti himaniiru.
Dubartoota ulfaanis nyaata foonii warshaan qophaa'ee gurguramu kannen irra akka of faggeessan himusaaniis, Taaymees liive gabaaseera.
Dhibeen kun namoota muraasa irratti ho'iinsa qaamaa cimaa fi balaqama kan fidu wayita ta'u, namoota umuriin guddoo ta'an (jaarrolee), garaa keessa kan jiran dabalatee daa'iman dhihoo dhalataniis irra caalaa kan hubuu danda'uudha.
Saamuudawwan (samples) 16 ol ta'an fi naannoo dhaabbata warshaa Polookwaanee irraa fudhatamanii qoratamanis Listeeriyaa monosaytoojeens akaaku baakteeriyaa ST 6 jedhamanii fi keessattu dhibe kana fiduu kan danda'an keessatti argamaniiru.
Poloony jehdamuun kan beekaman fi dhaabbata kanaan foonirra kan hojjetaman ''sausage'' gabaa irraa akka gara warshichaatti deebi'an waamichi ni godhamaa jechuunis Obbo Mootso'aleediin dubbataniiru.
Akkasumas warshaan kunnis ni cufama kan jedhu amantaan jira.
Baakteeriyaa Listeeriyaa jedhamu kun yeroo baay'ee dandeetti dhokkachuu fi haala itti baruun rakkisuun babala'achuu waan danda'uuf qarannoof heddu rakkisaadha.
Fayyadamtoonni hoomishaalee amma deebi'aniif waamichi godhameef kanneen bituun firiijii isaanii keessa kaa'aanii kan jiran firiijii isaanii waan akka barakinaan qulqulleefachuun akka isaanrra jirus himameera.
Dhukkubi Listeeriyaan fidu kun maali?
Yeroo baay'ee dhibeen kun karaa nyaata Listeeriyaan faalame nyaachuu fi namoota beeladaa waliin walitti dhiheenyaan baay'ee qabanirraa dhufa.
Aanan hindanfin fi bu'a ananii birooraas dhufuu ni mala.
Nyaata dursanii qopheefamuun gurguraman kan akka sandwichiis Listeeriyaan faalamuu danda'u.
Namoonni dhukkuba kanaan qabaman ho'iinsa qaamaa cimaa, balaqamaa fi garaa kaasaa dabalatee mallatto qufaa/utaalloo fakkaatutus itti dhagahama.
Namoonni hedduun dhukkuba kanaan qabaman kan dhukkubbiin itti hindhagahamne wayita ta'an, jaarroolee fi daa'iman xixiqqoon garuu addatti dhukkuba kanaaf kan saxilamaniidha.